Umaka: Izibalo | Martech Zone
Ungakulandelela Kanjani Ukuthunyelwa Kwamafomu Elementor ku-Google Analytics Events usebenzisa i-JQuery
NgoLwesine, Septhemba 23, 2021 NgoLwesine, Septhemba 23, 2021 Douglas Karr
Bengisebenza kusayithi leklayenti le-WordPress emasontweni ambalwa edlule elinobunzima obuncane. Basebenzisa i-WordPress ngokuhlanganiswa ne-ActiveCampaign yokukhulisa imikhondo kanye nokuhlanganiswa kweZapier kuZendesk Thengisa ngamaFomu Elementor. Kuyindlela enhle… ukukhahlela imikhankaso ye-drip kubantu abacela imininingwane bese behola abahola ngokufanele uma becelwa. Ngihlabeke umxhwele kakhulu ngokuguquguquka kwefomu lika-Elementor nokubukeka futhi
I-Salonist Spa ne-Salon Management Platform: Ukuqokwa, Inventory, Marketing, Payroll, nokuningi
NgoLwesithathu, Juni 2, 2021 NgoLwesithathu, Juni 2, 2021 Douglas Karr
I-salonist yisoftware yesalon esiza i-spa nama-salon ukuphatha amaholo, ukukhokha, ukubandakanya amaklayenti akho, nokwenza amasu wokumaketha. Izici zifaka: Ukuqokwa Kwama-Spas Nama-Salons Ukubhuka Ku-inthanethi - Usebenzisa i-smart Salonist Online yokubhuka isoftware, amakhasimende akho angakwazi ukuhlela, ukuhlela kabusha, noma ukukhansela ama-aphoyintimenti noma ngabe ukuphi. Sinobuchule bewebhusayithi nohlelo lokusebenza obungahlanganiswa ne-Facebook ne-Instagram izibambo zokuxhumana. Ngalokhu, inqubo yokubhuka ephelele iphelele
Kuyini iMarTech? Ubuchwepheshe Bokumaketha: Esidlule, Esamanje, Nekusasa
NgoMgqibelo, ngoMashi 27, 2021 ISonto, Ephreli 11, 2021 Douglas Karr
Ungathola ukuhleka kimi ngokubhala i-athikili nge-MarTech ngemuva kokushicilela ama-athikili angaphezu kuka-6,000 kubuchwepheshe bokumaketha iminyaka engaphezu kwengu-16 (ngale kweminyaka yobudala yale bhulogi… ngangikwi-blogger edlule). Ngikholwa ukuthi kufanelekile ukushicilela nokusiza ochwepheshe bezebhizinisi ukuthi babone kangcono ukuthi yayiyini iMarTech, ikusasa nekusasa lokuthi kuzoba yini. Okokuqala, kunjalo, ukuthi iMarTech iyisisekelo sokumaketha nobuchwepheshe. Ngikhumbule okuhle
Uwalandela Kanjani Amaphutha Angama-404 Ekhasi Angatholakalanga ku-Google Analytics
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 27, 2021 NgoLwesithathu, ngoMashi 24, 2021 Douglas Karr
Sineklayenti njengamanje izinga lalo elicwilile muva nje. Njengoba siqhubeka nokubasiza ukulungisa amaphutha abhalwe ku-Google Search Console, enye yezinkinga ezigqamile amaphutha angama-404 wekhasi angatholakalanga. Njengoba izinkampani zifudusa amasayithi, ezikhathini eziningi zifaka izakhiwo ze-URL ezintsha futhi amakhasi amadala abekade ekhona awasekho. Le yinkinga ENKULU uma kukhulunywa ngokusetshenziswa kwenjini yokusesha. Igunya lakho
Saturday, February 27, 2021 Wednesday, March 24, 2021
Ubuchwepheshe bokufunda bubucayi njengomphathi weCRM: Nazi ezinye Izinsizakusebenza
NgoMsombuluko, Januwari 18, 2021 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 23, i-2021 Katarzyna Banasik
Kungani kufanele ufunde amakhono we-tech njengoMphathi weCRM? Esikhathini esedlule, ukuze ube ngumphathi omuhle wobudlelwano beKhasimende ubudinga ukwenza i-psychology namakhono ambalwa wokumaketha. Namuhla, i-CRM ingumdlalo wobuchwepheshe kakhulu kunasekuqaleni. Esikhathini esedlule, umphathi weCRM wayegxile kakhulu ekutheni angayakha kanjani ikhophi le-imeyili, umuntu onomqondo wokudala. Namuhla, uchwepheshe omuhle weCRM ungunjiniyela noma uchwepheshe wedatha onolwazi oluyisisekelo